Bones – Studio – MMANIME
Blood Blockade Battlefront Kekkai Sensen Review ကမ္ဘာနဲ့ငရဲပြည်ကြားကပိတ်ဆို့ထားမှုတွေဟာ ပေါင်းကူးအနေနဲ့ New York မြို့မှာပွင့်ထွက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်New Yorkမြို့သူမြို့သားတွေရယ် တခြားကမ္ဘာကအကောင်တွေရယ်ဟာ ဖောက်ထွင်းလို့မရတဲ့ဖန်လုံးကြီးတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မြို့သူမြို့သားတွေဟာ ဒီလိုရူးကြောင်ကြောင်သတ္တဝါဆိုးကြီးတွေနဲ့အတူတူနှစ်နဲ့ချီပြီးနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့်နောင်ဆုံးမှာတော့ အဲ့ဖန်လုံးကြီးကိုဖောက်ထွင်းဖို့ကြံစည်တဲ့သူပေါ်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲတခြားသဘာဝလွန်လူသားတွေဟာလည်း အဲ့ဒီအကြံအစည်မအောင်မြင်ဖို့တားဆီးကြပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ဖက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့... အပတ်စဉ်သောကြာနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် Mmanime(dot)orgတွင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါခင်ဗျ Season 1 Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10
Noragami Aragoto OVA Overview Bundled with the limited editions of the 15th and 16th volumes of the manga. 15th volume DVD is planned to be released on November 17, 2015. It will adapt the Nijikan no Teikei ni So Koto (Following A Stereotypical Two Hours) story from the first volume of the Noragami: Shuuishuu spinoff manga 16th volume DVD will adapt the manga's 41st chapter where ...
Noragami Review - (Anime dreamies) Yato (ယတို) လို့ခေါ်တဲ့ နတ်ဘုရားတစ်ပါး သူက သူများတွေလို နာမည်ကြီးတဲ့ နတ်တော့မဟုတ်ဘူး.. လူတွေရဲ့ဆုတောင်းကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ စစ်နတ်ဘုရား။ မထင်မရှား နတ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ အတွက် လောဆယ်သူ့အခြေအနေက ဆင်းရဲမွဲတေလျက်.နေစရာနတ်နန်းတောင်မရှိတဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်ဘဝလေး... လူတွေရဲ့ ဆုတောင်းကို ယန်းငါးပြားထဲနဲ့ လိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတဲ့ကာလပေါ့ နတ်ဘုရားတွေမှာ Shinki လို့ခေါ်တဲ့ လက်သုံးတော်(သေဆုံးပြီးသားဝိဥာဉ်)တွေရှိတယ်.. တစ်နည်းအားဖြင့် သူတို့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ လက်နက်တော်ပေါ့... အဲ့လက်သုံးတော်မရှိရင် နတ်ဘုရားတွေက တစ္ဆေတွေကို မနှိမ်နင်းနိုင်ဘူး။ တစ်နေ့မှာ ကြောင်လေးတစ်ကောင်ပျောက်လို့ရှာပေးပါဆိုပြီးကလေးတစ်ယောက်ကဆုတောင်းတယ်.. အဲ့မှာ Yato က ဆုတောင်းဖြည့်ပေးဖို့ကြောင်ပျောက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာ ကားတိုက်ခံရမလိုဖြစ်တယ်..(တကယ်က တိုက်ခံရလဲမသေဘူး Yato က နတ်ကိုး) အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ Hiyori (ဟီယိုရီ) လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးက Yato ကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားရာကနေ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်သွားရော... Accidient နောက်ပိုင်းမှာကောင်မလေးက လိပ်ပြာခဏခဏလွင့်လေ့ရှိပြီး တမလွန်နဲ့ လူ့ဘုံနှစ်ခုနှစ်ခုကြားကို တစ်ချိန်တည်းမှာ တည်ရှိနေနိုင်တဲ့ ဝိဥာဉ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်... ငမွဲနတ်ဘုရား Yato နဲ့ပတ်သတ်မိတဲ့ ဟီယိုရီလေးရယ် နောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့ Yukine (ယူကီနဲ) လို့ခေါ်တဲ့ လက်သုံးတော်ကောင်လေးရယ် သူတို့သုံးယောက်ကြားက သံယောဇဉ်ကြိုးလေးတွေအကြောင်း စိတ်၀င်စားစရာ ဟာသတွေနဲ့ကြည့်ရမှာပါ။တိုက်ခန်းခိုက်ခန်းတွေလဲပါပါတယ်။ Season 1 Full Episode Links Season ...
TMDb: 7.7/10 81 votes